Semalt विशेषज्ञ सेयरहरू लुकेका फेसबुक र ट्विटर ट्रिकहरू प्रत्येक SEO चैम्पियनले सिक्नु पर्दछ
एक सोशल मिडिया मार्केटरसँग दैनिक आधारमा धेरै चुनौतिहरू छन्। अझ बढी जटिल यो हो कि त्यसले कसरी ट्रेन्डि topics शीर्षकहरू मोनिटर गर्दछ र उत्तम वेबसाइट रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्दछ, वेबसाइटमा हेराईहरू, सेयरहरू, लाइकहरू र टिप्पणीहरूको संख्या बढाउन।
यद्यपि सोशल मिडिया मार्केटरहरूलाई फेसबुक र ट्विटर सम्बन्धी सबै प्रकारका युक्तिहरू र युक्तिहरू थाहा छ, तर निम्नहरू , सेलिफ्टको ग्राहक सफलता प्रबन्धक ओलिभर कि byले प्रदान गरेको हो, कहिले पनि अनलाइन प्रकट गरिएको छैन।
फेसबुक: लिंक बचत गर्नुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ फेसबुकमा सेभ लिंक छ जुन सबै समय लुकेको हुन्छ? तपाईंको सामग्रीको गुणवत्ता बढाउन र यस सामाजिक नेटवर्कमा अधिक धेरै आगन्तुकहरू संलग्न गर्न, तपाईंले त्यो विकल्प सक्रिय गर्नुपर्नेछ। यसले तपाईंलाई साइटलाई अनुकूलित गर्न मद्दत गर्नेछ र मेनू सेक्सनमा गाडिन्छ।
ट्विटर: मनपर्ने द्वारा बचत गर्नुहोस्
तपाईंको ट्वीटहरू क्युरेट गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्, र तपाईं यसको बारे मा जान्नको लागि सोशल मिडिया सल्लाहहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। ट्विटरमा, यो विकल्पले तपाईंलाई तपाईंको दर्शक निर्माण गर्न दिन्छ र तपाईंको वेबसाइट धेरै विचारहरू लिन सक्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले कभर छविलाई बुद्धिमानीपूर्वक छनौट गर्नुभयो, र यो ट्विटरको मापदण्डहरूमा निर्भर छ।
फेसबुक: मोबाइलमा फोटोहरू सम्पादन गर्नुहोस्
यो ती मध्ये एक चीज हो जुन तपाईं धेरैलाई लगभग दैनिक उपेक्षा गरिन्छ। फेसबुकमा, त्यहाँ विकल्पहरूका एक पछि संख्याहरू छन् जसले तपाईंलाई फोटोहरू सम्पादन गर्न मद्दत गर्दछ चाहे तपाईं व्यक्तिगत कम्प्यूटर वा मोबाइल उपकरण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंले यो विकल्पको बारेमा सुन्नु भएको छैन। स्पष्ट रूपमा, यो मेनु सेक्सनमा लुकेको रहन्छ, र हामी मध्ये अधिकांश यस विकल्पलाई कसरी सक्रिय गर्ने र कसरी प्रयोग गर्ने भनेर बेवास्ता गर्दछौं। तर एकचोटि पूर्ण सक्रिय भएपछि तपाईले ठूलो संख्यामा तस्बिरहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई सामाजिक मिडियामा साझा गर्न सक्नुहुनेछ, र केही सेकेन्डमा तपाईंको मोबाइल उपकरणको फोल्डरमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
ट्विटर: कसले तपाईंलाई अवरुद्ध गरेको छ पत्ता लगाउनुहोस्
यदि तपाईं आफ्नो व्यवसायको बारेमा ट्वीट गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई कसले ट्विटरमा पछ्यायो र किन। तथ्य यो हो कि धेरै मानिसहरूलाई यो कसरी सम्भव बनाउने थाहा छैन, तर तपाईं यसको बारे सबै कुरा जान्न ट्विटर एनालिटिक्समा जान सक्नुहुन्छ। कसले तपाईबाट अब सुन्न अस्वीकार गरेको छ भनेर पत्ता लगाएर, तपाईलाई कस्तो प्रकारको मानिस मन पराइरहेको छ र तपाईले एक विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै अन्ततः तपाइँको आफ्नो रणनीति मुल्याate्कन र सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं त्यसपछि तपाईंको रणनीतिहरू तपाईंको अनुयायीहरूको आवश्यकता अनुसार पign्क्तिबद्ध गर्न सक्नुहुनेछ र तदनुसार तपाईंको ट्विटर सेटिंग्स समायोजित गर्नुहोस्।
फेसबुक: मित्रै बिना फलो गर्नुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ फेसबुकमा कसले तपाईंलाई पछ्याउँदैछ? इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, हामी मध्ये धेरैलाई समेत उनीहरू आफ्ना अनुयायीहरू को हुन् भनेर थाहा छैन। यस सुविधाको साथ, जुन फेसबुकमा लुकेको छ, तपाईं व्यक्तिहरूको प्रोफाइल हेर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको पोष्टहरू प्रत्येक दिन पछ्याउँदै छन्। यसले तपाईलाई यहाँ एक राम्रो विचार दिनेछ जो यहाँ छ तिम्रो प्रगति को लागी र को लागी समस्याहरु पैदा गर्न सक्छ।
ट्विटर: फिट म्यूट गर्नुहोस्
ट्विटरको म्यूट फीचर भनेको तपाईंले ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यहाँ जहाँ तपाइँ सुविधाहरू र विकल्पहरूको किसिमका म्यूट गर्न सकिन्छ र केलाई अनमेल हुन आवश्यक छ भनेर फेला पार्न सक्नुहुनेछ। यो सबै तपाइँको साइट को विश्वसनीयता अनलाइन वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाइँको अनुयायी हप्ता पछि हप्ता रहनेछ।